Thenga Umbuthano Wokuqina Kwensimbi Ongasuswa - Ukuhanjiswa Kwamahhala Futhi Akukho Intela | WoopShop®
Umbuthano Wokuqina Kwensimbi Ongasuswa
$ 38.99 Intengo ejwayelekile $ 63.99
Umbuthano Wokuqina Kwensimbi Ongasuswa - Obomvu ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Ubudala: Iminyaka eyi-12-60 ubudala
Inombolo yesibonelo: 453212
Umsebenzi: hoop yokuqina
Ububanzi bungamayelana nama-88 cm
Imininingwane: isuswe ezingxenyeni eziyi-6
Izinto: insimbi ye-tubular + i-NBR foam
Izici: isuswe ezingxenyeni eziyi-6, imelana kakhulu nokuqhekeka
Umsebenzi: Fitness Hoop, Workout Circle, Bodybuilding Exercise Circle, Crossfit Equipment, Lose Weight Hoop
Uhlobo: I-Hard Tube
Ngiyayithanda ihupu ngakho-ke ngiyilayele okwesibili :)
Ngiyayithanda! Umkhiqizo omuhle !!!
Kuhle, ngiyabonga kakhulu !!!
Iphelele ngokuphelele engenaphutha ifike ngokushesha inhle kakhulu
Kwakuyizingxenye nje ezihlangene ukuxhuma isembozo se-foam kuyinto enhle kakhulu. manje kumele ngibe nomkhuba we-hulan